အဆိုပါ Cable ကိုကားများ၏သမိုင်းနှင့်လျှပ်စစ် Streetcar
Streetcar နှင့်ပထမဦးစွာ Cable ကိုကား
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့အင်ဒရူးစမစ် Hallidie အများအပြားသည်မြင်းမြို့တော်ရဲ့မတ်စောက်သောလမျးကိုတက်ကလူရွေ့လျား၏မချိမဆံ့အလုပ်ကြဲ, ဇန်နဝါရီလ 17, 1861 ရက်တွင်ပထမဦးဆုံးကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုမူပိုင်ခွင့်။ သူကမူပိုင်ခွင့်ခဲ့သောသတ္တုကြိုးကိုသုံးပြီး Hallidie ကားအင်အားကြီးအတွက်ရေနွေးငွေ့-မောင်းနှင်ရိုးကိုကူးသောသံလမ်းအကြားတစ်ဦး slot ကတစ်ခုအဆုံးမဲ့ cable ကိုပြေးနေဖြင့်ရေးဆွဲခဲ့ကြရာကယန္တရားကြံစည်။
ပထမ Cable ကိုမီးရထား
ဘဏ္ဍာရေးကျောထောက်နောက်ခံစုဆောင်းပြီးနောက် Hallidie နှင့်သူ၏အပေါင်းအသင်းပထမဦးဆုံးကေဘယ်လ်ကြိုးရထားလမ်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါလမ်းကြောင်း 307 ပေ Starting Point သို့အထက်တွင်တစ်ဦးတောင်ကုန်း၏မောက်ဖို့လမ်းကြောင်း၏ 2,800 ခွကေိုတစ်လျှောက်တွင်ရွှံ့စေးနှင့် Kearny လမ်းများကို၏လမ်းဆုံကနေပြေးလေ၏။ ကတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မတ်တပ်ရပ်အဖြစ်သြဂုတ်လ 1, 1873 များ၏နံနက်ပိုင်းတွင် 5:00 မှာအနည်းငယ်အာရုံကြောလူတို့သည်ကေဘယ်လ်ကားပေါ်တွင်တက်။ ထိန်းချုပ်မှုမှာ Hallidie နှင့်အတူကားကိုဆင်းသက်တော်မူခြင်းနှင့်အောက်ခြေမှာလုံခြုံစိတ်ချစွာရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရဲ့မတ်စောက်သောမြေပြင်အနေအထားပေးထား, cable ကိုကားတစ်စီးတမြို့သတ်မှတ်သို့ရောက်ကြ၏။ 1888 ခုနှစ်ရေးသားခြင်း, Harriet Harper ကိုကြေငြာ:
ယင်း၏ကေဘယ်လ်ကားစနစ်ကထိုသို့တယောက်တည်းနေက၎င်း၏စုံလင်တဲ့အချက်ရောက်ရှိကြပုံရသည်ပေးသောစနစ်, ဒါပေမယ့်၏အံ့သြဖွယ်အရှည်မဟုတ်ပါဘူး: မည်သူမဆိုငါကယ်လီဖိုးနီးယားအရှိဆုံးထူးခြားတဲ့, တိုးတက်သော feature ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအရာကိုအကြှနျုပျကိုမမေးသင့်တယ် "တကယ်လို့ငါချက်ချင်းဖြေဆိုသင့်ပါတယ်။ တစ်နီကယ်၏ chink ဘို့သင့်ကိုသနားသောစီးနင်း။ ငါဆန်ဖရန်စစ္စကိုဤမြို့ကိုလှည့်ပတ်ကြပါပြီ, ငါသည်တောင်ပိုင်းဒင်္ဂါးပြား၏ဤအသေးငယ်ဆုံးအဘို့အသုံးသီးခြား cable ကိုလိုင်းများပါ (သင့်လျော်လွှဲပြောင်းအားဖွငျ့) ၏အရှည်ဝင်ကြပြီ။ "
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုလိုင်း၏အောင်မြင်မှုကိုကြောင်းစနစ်၏ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အခြားမြို့ကြီးများရှိလမ်းမီးရထား၏နိဒါန်းမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အများစုမှာအမေရိကန်မြူနီစီပယ်ဘို့မြင်း-ရေးဆွဲကားများစွန့်ပစ်ခဲ့သော လျှပ်စစ် 1920 နေဖြင့်စွမ်းအင်သုံးကားများ။
America မှာပထမဦးဆုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်တစ် omnibus ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာ stagecoach တူများနှင့်မြင်းများအားဖြင့်ဆွဲထုတ်ခဲ့သည်။ အမေရိကရှိလုပ်ကိုင်ရန်ပထမ omnibus ဒါဟာအစက New York မှာပထမဦးဆုံးမီးဌာနကစုစည်းပြီးကူညီနေသူသည်အာဗြဟံ Brower ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည် 1827. ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်စီးတီးရှိတက်နှင့်ဘရော့ဒ်ဝေးချ running စတင်ခဲ့သည်။
ရှည်လျားသောသူတို့သွားကြဖို့လိုခငျြသညျ့နရောကလူယူ America မှာမြင်း-ရေးဆွဲရထားရှိပါတယ်ခဲ့သညျ။ အဘယ်အရာ omnibus အကြောင်းကိုအသစ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားခဲ့တာကြောင့်အချို့သတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပွေးအလွန်နိမ့်ခစွဲချက်တင်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အပေါ်ရဖို့လိုချင်သူတွေကိုလေထုထဲတွင်မိမိတို့လက်ကိုချီလွှဲလိမ့်မယ်။ အဆိုပါယာဉ်မောင်းတစ်ဦး stagecoach ဒရိုင်ဘာကဲ့သို့ပင်ရှေ့မှာ omnibus ၏ထိပ်ပေါ်မှာခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာထိုင်လေ၏။ အထဲမှာစီးသူလူအ omnibus ပယ်ရချင်ခဲ့တယ်တဲ့အခါမှာသူတို့တစ်တွေနည်းနည်းသားရေသိုင်းကြိုးပေါ်မှာဆွဲ။ အဆိုပါသားရေသိုင်းကြိုးပု omnibus မောင်းနှင်သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ခြေကျင်းချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ မြင်း-ရေးဆွဲ omnibuses 1826 ကနေအကြောင်းကို 1905 သည်အထိမရေိကမြို့ကြီးတွေမှာသို့ပွေးလေ၏။
အဆိုပါ Streetcar အဆိုပါ omnibus ကျော်ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးသောတိုးတက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအ Streetcar လည်းမြင်းများအားဖြင့်ဆွဲထုတ်ပေမယ် Streetcar အစားကိုပုံမှန်လမ်းများတစ်လျှောက်ခရီးသွားလာ၏လမျးခရီးအလယ်၌ထားကြ၏အထူးသံမဏိသံလမ်းတလျှောက်လှိမ့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Streetcar ၏ဘီးကိုလည်းသူတို့ကသံလမ်းကိုပိတ်ထားလှိမ့်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ဂရုတစိုက်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ထုတ်လုပ်သော, သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးကမြင်း-ရေးဆွဲ Streetcar အများကြီးပိုအဆင်ပြေတစ်ခု omnibus ထက်ကြီးနှင့်တစ်ခုတည်းမြင်းပိုကြီးပြီးပိုခရီးသည်သယ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Streetcar ဆွဲထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပထမဦးဆုံးအ Streetcar 1832 ခုနှစ်တွင်ဝန်ဆောင်မှုစတင်ခဲ့နှင့် New York မှာ Bowery လမ်းတစ်လျှောက်ပြေးလေ၏။ ဒါဟာဆရာယောဟနျ Mason ဆိုတစ်ဦးချမ်းသာကြွယ်ဝဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ပိုင်, ယောဟန် Stephenson ကတစ်ဦး Irishman ကတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Stephenson ကယ့် New York ကကုမ္ပဏီမြင်း-ရေးဆွဲ Streetcar ၏အကြီးဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံးဆောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ New Orleans 1835 ခုနှစ် Streetcar ကမ်းလှမ်းရန်ဒုတိယအမေရိကန်မြို့ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါပုံမှန်အမေရိကန် Streetcar နှစ်ခုသင်္ဘောသားအဖွဲ့ဝင်များက operated ခဲ့သည်။ တယောက်သောသူတစ်ဦးမောင်းသူ, ရှေ့ကိုတက်စီး။ သူ့အလုပ်ကစိုးစံအစုတခုကထိန်းချုပ်ထားမြင်း, မောင်းဖို့ပဲ။ အဆိုပါယာဉ်မောင်းကိုလည်းသူက Streetcar ရပ်တန့်ဖို့အသုံးပွုနိုငျတဲ့ဘရိတ်လက်ကိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Streetcar ပိုကြီးတယ်တဲ့အခါ, တစ်ခါတစ်ရံနှစ်ခုနှင့်သုံးမြင်းများတစ်ခုတည်းကားတစ်စီးကိုဆွဲယူဖို့အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယသင်္ဘောသားတစ်ဦးကိုကား၏နောက်ကျောမှာစီးသူစပယ်ယာခဲ့သည်။ သူ့အလုပ်ကခရီးသည် Streetcar အပေါ်နဲ့ off get ကူညီရန်နှင့်၎င်းတို့၏ပုံမှန်အတိုင်းစုဆောင်းရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကယာဉ်မောင်းလူတိုင်းဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ကြီးကမောင်းသူကားအခြားအဆုံးမှာစကားကိုနားထောငျနိုငျတဲ့ခေါင်းလောင်းတွဲခဲ့တဲ့ကြိုးပေါ်ဆွဲ, ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အန္တရာယ်ကင်းအခါတစ်ဦး signal ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။
Hallidie ရဲ့ Cable ကိုမော်တော်ကား
အမေရိကားရဲ့ Streetcar လိုင်းများပေါ်မြင်းများကိုအစားထိုးနိုင်မယ့်စက်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပထမဦးဆုံးအဓိကကြိုးပမ်းမှုဟာသံလမ်းအကြားမြောင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးအဆုံးကနေခြေရာခံအောက်အခန်းထဲသို့တည်ဆောက်ခြင်းလိုအပ်သော cable ကိုကားမြင်းကားများအနေဖြင့် Streetcar လိုင်းများပြောင်းင်ပြီး 1873 ခုနှစ်မှာအတွက်ကေဘယ်လ်ကားခဲ့သည် အခြားဖို့လိုင်း။ ဤအခန်းတစ် Vault လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ Vault ပြီးဆုံးသောအခါသေးငယ်တဲ့အဖွင့်ထိပ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကရှည်လျားကြိုးကို Vault အတွင်း၌ထားရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါကြိုးကို Streetcar လိုင်းများ၏တဦးတည်းအဆုံးကနေအခြားမြို့လမ်းများအောက်တွင်ပြေးလေ၏။ အဆိုပါ cable ကိုကြီးမားတဲ့ကွင်းဆက်သို့ spliced ​​ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်လမ်းပေါ်၏ဘေးထွက်မှာအင်အားကြီးတည်ရှိသောဧရာဘီးအဲဒီမှာနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ရေနွေးငွေ့အင်ဂျင်အားဖြင့်ရွေ့လျားထားရှိမည်ခဲ့သည်။
အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားများကိုယ်တိုင် Vault သို့ကားကိုအောက်တွင်ချတိုးချဲ့သူသွားဖို့ကားကိုလိုချင်သည့်အခါကားများ၏အော်ပရေတာမှရွေ့လျား cable ကိုပေါ်သို့တံခါးကျင်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းကိရိယာတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ သူကရပ်တန့်ဖို့ကားကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာသူက cable ကိုလွှတ်ပေးရန်နိုင်ဘူး။ cable ကိုအဖြစ်ဖွင့်ခြင်းနှင့်တောင်ကုန်းဆင်း, ထောင့်လှည့်ပတ်သွားလိုနိုင်ခဲ့သည်သေချာအောင်ဖို့ Vault အထဲမှာအများကြီးအဲဒီမှာဘီးရှိခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံးကေဘယ်လ်ကြိုးကားများ San Francisco မှာပွေးလေ၏ပေမယ့်, ကေဘယ်လ်ကားများ၏အကြီးဆုံးနှင့်အလုပ်အများဆုံးသင်္ဘောချီကာဂို၌ရှိ၏။
အများစုမှာကြီးမားသောအမေရိကန်မြို့ကြီးများ 1890 ခွငျးအားဖွငျ့တစျခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကေဘယ်လ်ကားလိုင်းများရှိခဲ့ပါတယ်။
ဖရန့် Sprague 1888. အတွက်ဒါဟာပထမဆုံးအကြီးစားနှင့် Streetcar တစ်မြို့တစ်ခုလုံးရဲ့ system ကို run ဖို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအောင်မြင်သောအသုံးပြုမှုခဲ့ Richmond, ဗာဂျီးနီးယားအတွက်လျှပ်စစ် Streetcar တစ်ဦးပြည့်စုံ system install လုပ်ခြင်း။ Sprague သူ 1878 ခုနှစ်တွင် Annapolis တွင်, Maryland အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရေတပ်အကယ်ဒမီမှကျောင်းဆင်းပြီးရေတပ်အရာရှိတဦးအဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် 1857. ခုနှစ် Connecticut တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူက 1883 ခုနှစ်တွင်ရေတပ်ကနေနှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့်သောမတ်စ်အက်ဒီဆင်များအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်သွား၏။
အတော်များများကမြို့ကြီးများတစ်ခု overhead ဝါယာကြိုးလမ်းများကျော် installed ခဲ့ပါတယ်, ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခဲ့သည်ရှိရာအင်အားကြီးကနေ Streetcar မှလျှပ်စစ်မီးရရှိရန် 1888. ပြီးနောက်လျှပ်စစ်-powered Streetcar လှည့်။ A Streetcar က၎င်း၏အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာတာရှည်ဝင်ရိုးစွန်းနှင့်အတူဤလျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးမထိလိမ့်မယ်။ ပြန်အင်အားကြီးမှာကြီးမားတဲ့ရေနွေးငွေ့အင်ဂျင် Streetcar လုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်ကြီးမားမီးစက်ဖွင့်မယ်။ ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းကားများ: တစ်ဦးကနာမည်အသစ်မကြာမီလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစွမ်းအားဖြင့် Streetcar များအတွက်တီထွင်ခဲ့သည်။
အဘယ်သူသည်ဗျည်းအက္ခရာနှင့်အတူတက် လာ. ?
အကြောင်း 10 မကြာသေးခင်ကရှားပါးကျားများနှင့်ခြင်္သေ့ကိုလေ့လာပါ
ပါလက်စတိုင်းတစ်ဦးမှ Country မဟုတ်
SUNY Brockport GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ဘယ်လို gladiator တိုက်ပွဲများရပ်တန့်ခဲ့ကြသလား
ကျွမ်းဘားဒုတ်: သင့်ကလေး Started Get
နယူးအင်္ဂလန် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
အင်္ဂလိပ် Grammar အတွက် Anticipatory '' ဒါဟာ ''
ပရင့်ထုတ်ရန်အသင်ထောက်ကူ, စီမံကိန်းများနှင့်ပရင့်ထုတ်ရန်အ Form များ
Wesleyan ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
သည် "ဂလိုရီယာ" ၏အပြီးအစီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်စာပေမှတစ်ဦးကလမ်းညွှန်
လွတ်လပ်သောနှင့်မှီခို Variables ကိုကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ
အဆိုပါ Aufbau နိယာမ - အီလက်ထရောနစ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် Aufbau နိယာမ